उषा थपलिया - कान्तिपुर समाचार
अर्थोर्पार्जनमा महिलाहरू अघि बढ्न थालेका छन् । कमाउनु घरायसी गर्जो टार्नु मात्र हैन, व्यक्तिलाई आत्मसम्मानको अनुभूति गराउने प्रमुख कडी पनि हो । नेपाली महिलामा अर्थोपार्जन र आत्मसम्मानको तह अभिवृद्धि हुनु नितान्त आवश्यक देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन–अनुसन्धानले पनि यही इंगित गर्छन् ।
सार्वजनिक बसकी ती युवती
सार्वजनिक यातायातमा एक साँझ एक युवतीसँगैको सिटमा थिएँ म । कुराकानी हुँदा थाहा भयो— उनी सिंहदरबारमा जागिरे रहिछन् । साँझ त्रिचन्द्रमा स्नातकोत्तरको कक्षा लिएर साढे साततिर घर फर्कने रहिछन् । ग्रामीण विकास (आरडी) को पढाइ सजिलो के हुन्थ्यो ? त्यसमाथि बिहान भातभान्सा, दिउँसो जागिर र राति थकाइ ।
आमा : निरक्षर तर दूरदर्शी
मेरी आमा, जो दस वर्षकै उमेरमा पराई घर छिर्नुभयो  । अहिले आठ दशक उमेर पार भैसकेको छ, तैपनि आफ्नो जीवनमा आइपरेका कष्ट र संघर्षका कथा व्यक्त गर्दा एक अंश पनि तलमाथि हुँदैनन्, ती मूर्तिमा खोपिएको आकृतिझैं हृदयमै कुदिएका छन् ।
भान्छामा छोराछोरीलाई कसरी लोभ्याउने ?
पन्ध्र वर्ष पुग्नै लागेकी छोरीले यो वर्ष एसईई दिई । प्लेग्रुपदेखि १० कक्षासम्म करिब १२ वर्ष उसले स्कुलमा बिताइसकेकी छ । कहिलेकाहीं बाहेक हरेक दिन उसलाई घरबाटै खाजा बनाएर पठाइयो । सुरुमा बजारिया खानेकुराप्रतिको उसको लगाव अचाक्ली थियो ।
एकल आमाको आत्मसम्मान
नेपाली महिला संवैधानिक रूपमा अधिकारसम्पन्न हुँदै आएका छन्  । संविधानमा महिलाअधिकार प्रत्याभूति हेर्दा विकसित देशहरूलाई समेत नेपालले पछाडि पारेको छ  ।
‘सपना ती होइनन्, जो निद्रामा आउँछन्, सपना ती हुन्, जसले पूरा नभई सुत्न दिँदैनन् ।’ भारतका एघारौं राष्ट्रपति तथा प्रतिष्ठित वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलामको भनाइ हो यो । हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि राष्ट्र निर्माणका लागि आफ्ना सपना उजागर गरिरहेका छन् तर उनको सपनालाई बल पुर्‍याउनेभन्दा हावामा उडाउने प्रवृत्ति आमजनमानसमा बढी देखिन्छ ।
सबै सदस्यको उपस्थिति हुँदाहुँदै पनि प्राय: घरपरिवारमा सन्नाटा छाएको देखिन्छ । हरेक व्यक्ति हरबखत आफ्नो साथमा रहेको उपकरणतर्फ ध्यानाकृष्ट हुँदा एकअर्कोसंँग संवाद, छलफल पातलिएको छ ।
धेरै नेता महिला अधिकारको चर्को दुहाइ दिन्छन् । तर आफ्नो परिवारमा महिलामाथि निजी सम्पत्तिझैं नियन्त्रण गर्छन् । उ द्योगी चण्डीराज ढकालकी दिवंगत आमाको तेह्रौं दिनको पुण्यतिथिमा प्रसाद ग्रहणका लागि केही दिनअघि विद्युतीय निम्तो आयो ।
विश्व पुँजीवाद र समाजवादकै गोलचक्करमा घुमिरहेको छ । कार्ल माक्र्सको क्रान्तिकारी समाजवाद प्रतिपादनसँंगै समाजवादीहरूले पुँजीवादको आयु सकिएको घोषणा गरे । सन् १९९० ताका सोभियत संघ र पूर्वी युरोपका मुलुकहरूमा समाजवादले असफलता बेहोरेपछि यसको भविष्य नरहेको विश्लेषण गर्न पुँजीवादीहरू पनि पछि हटेनन् ।